यूएईमा कोरोना भ्याक्सिनको विश्वमै सबैभन्दा ठूलो ट्रा’यल ! – Sidha Online Post
मुख्य पृष्ठ /News/यूएईमा कोरोना भ्याक्सिनको विश्वमै सबैभन्दा ठूलो ट्रा’यल !
यूएईमा कोरोना भ्याक्सिनको विश्वमै सबैभन्दा ठूलो ट्रा’यल !
काठमाडौं। संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो को’रोनाभाइरस भ्या’क्सिनको ट्रायल गरिएको छ । चीनको नाइना नेशनल फा’र्मास्युटिकल ग्रुप क’र्प अर्थात सि’नोफार्मले विकास गरेको भ्या’क्सिनको तेस्रो र अन्तिम चरणको ट्रायल युएइमा गरिएको हो । यो ट्रायलमा ३१ हजार जना स्वयंसेवक सहभागी थिए । यी स्वयंसेवकमध्ये नेपाली पनि थिए तर नेपालीको संख्या कति थियो भन्ने खुलासा भइसकेको छैन ।खलीज टाइम्सका अनुसार ६ हप्तामा यी सबै स्वयंसेवकलाई भ्या’क्सिन लगाइएको हो ।
अब स्वयंसेवकको लागि नाम दर्ता ब’न्द गरिसकिएको छ । स्वास्थ्य अधिकारीहरुले स्वयंसेवकहरुको संख्या पर्याप्त भइसकेकोले नयाँ स्वयंसेवक दर्ता ब’न्द गरिएको बताएका छन् ।भ्या’क्सिन लगाउने स्वयंसेवकहरु नेपालसहित १२० भन्दा धेरै देशका नागरिकहरु छन् ।स्थानीय अधिकारीहरुले कम समयमै भ्या’क्सिनेशनको लक्ष्य पूरा गरेकोमा स्वास्थ्य कर्मचारीहरु र स्वयंसेवकहरुको प्रशंशा गरेका छन् ।यूएईमा ट्रायल गरिएको यो भ्या’क्सिनलाई चीनले तयार गरेको हो । चीनको कम्पनी सि’नोफार्मले संयुक्त अरब इमिरेट्सको जी ४२ हे’ल्थकेयरसँग मिलेर ट्रायलको अ’भियान चलाएको हो ।
सि’नोफार्मले पहिलो र दोस्रो चरणको ट्रायलमा भ्या’क्सिनले राम्रो नतिजा दिएको बताएको छ । रिपोर्टका अनुसार हजारौं मानिसहरुलाई भ्या’क्सिनको दोस्रो डो’ज दिइसकिएको छ । अब ती स्वयंसेवकहरुको निरन्तर नि’गरानी गरिएको छ ।अबु धाबीका स्वास्थ्य मन्त्री अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद अल हौ’वेसले भने कि कोरोना महामारीका विषयमा सरकार सुरु देखि नै विश्वव्यापी सहभागिताको साथ काम गरिरहेको छ । सोमबार कोरोनाभाइरसका कूल केस संख्या २ करोड ५४ लाखभन्दा धेरै भइसकेको छ ।
पोखरामा पहिरोमा परी ४ जनाको मृत्यु, ९ जना घाइते
बेसार र ज्वानोले
काठमाडौं उपत्यका कोरोनाको उच्च जो’खिममा
हेलिकप्टर चार्टर्ड गरेर थप उपचार गर्न काठमाडौं आएपछि कोरोना पुष्टि